ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် စီစဉ်ပုံ - Together
AutComplete ရလဒ်များကိုရရှိနိုင်သည့်အခါပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်ရွေးချယ်ရန် arrow ကိုအသုံးပြုပါ။ ကိရိယာသုံးစွဲသူများကိုထိခြင်း, ထိခြင်းသို့မဟုတ်ပွတ်ဆွဲအမူအရာဖြင့်စူးစမ်းလေ့လာပါ။
Care Coordination and Handoffs
စာသင်ကျောင်း ပံ့ပိုးမှုအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်
Asking for Help 2
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် စီစဉ်ပုံ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် စီစဉ်ပုံ လက်ရှိစာမျက်နှာ
တစ်ခါတစ်ရံတွင် အရွယ်ရောက်သူများသည် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ရန် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ သို့မဟုတ် ဆန္ဒမရှိပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သို့မဟုတ် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဤအခြေအနေသည် ရုတ်တရက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာတစ်ခုကို ရရှိထားခြင်းသည် အသုံး၀င်သည်။
ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာဆိုသည်မှာ အနာဂတ်တွင် သင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက သို့မဟုတ် အချို့သောဖြစ်ရပ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်းကို သင်မပြုလုပ်နိုင်ပါက ပေးထားသော သင်၏ဆေးဆိုင်ရာစောင့်ရှောက်မှုကို သင်မည်ကဲ့သို့လိုချင်ကြောင်း ရေးသားဖော်ပြချက်ဖြစ်သည်။
ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာသည် အဘယ်ကြောင့် အရေးပါသနည်း။
ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာများကို ပြည့်စုံအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည် သင့်ကို သင်၏အနာဂတ် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုကို ထိန်းနိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပေးသည်။
လေးနက်သော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ကျန်းမာလာသောအခါ၌ပင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပြင်းထန်စွာဖျားနေပါက ထိုကဲ့သို့သော ဆုံးဖြတ်ချက်များသည် ပို၍ထိခိုက်စေနိုင်သည့်ပုံပေါ်သည်။
သင်သည် သင်၏ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာကို မည်သည့်အချိန်မဆို ပြောင်းလဲနိုင်သည် သို့မဟုတ် ဖျက်သိမ်းနိုင်သည်။ သင်လုပ်ဖို့ရန်လိုသော အရာများမှာ သင်၏ဆရာဝန်ကိုပြောပြရန် သို့မဟုတ် ဖောင်အသစ်မိတ္တူတစ်စောင်ဆရာဝန်အား ပေးရန်ဖြစ်သည်။ ဆရာဝန်သည် သင်၏ဆေးမှတ်တမ်းတွင် ပြောင်းလဲမှုကို မှတ်ချက်ပြုမည်။ ထို့အပြင် သင်၏မိသားစုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များပြုလုပ်ရန် သင်ခန့်အပ်ထားသောသူက ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သိ​ကြောင်းသေချာပါစေ။
သင်၏အရေးကြီးသော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ စာများနှင့်အတူ စာရွက်စာတမ်းမိတ္တူတစ်စောင်ကို သိမ်းထားပါ။
ယေဘုယျအားဖြင့် ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာအမျိုးအစား အဓိက နှစ်မျိုးရှိသည်။
သင်အလိုရှိနိုင်သော သို့မဟုတ် အလိုမရှိနိုင်သော စောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားကို ပြဆိုထားသော တည်ရှိဆဲဖြစ်သော သေတမ်းစာများ သို့မဟုတ် အဆင့်မြင့်စောင့်ရှောက်မှု အစီအစဉ်များ
ရှေ့နေ၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အာဏာများနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ကိုယ်စားလှယ်များ ခန့်အပ်ခြင်းသည် သင့်အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်များချရန် တစ်စုံတစ်ယောက်အား ရွေးချယ်ရန် ခွင့်ပြုပါသည်။
သီးခြားဖော်ပြချက်များသည် ပြည်နယ်အလိုက်နှင့် နိုင်ငံဥပဒေအလိုက် ကွဲပြားနိုင်သည်။
တည်ရှိဆဲဖြစ်သော သေတမ်းစာ သို့မဟုတ် စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာအစီအစဉ်
အကယ်၍ အချိန်ကျသောအခါ သင်သည် သင်၏ဆန္ဒများကို သိရန် မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက တည်ရှိဆဲဖြစ်သော သေတမ်းစာများနှင့် စောင့်ရှောက်မှုဆိုင်ရာ ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာအစီအစဉ်များသည် သင့်ကို သင်လိုချင်မည့် သို့မဟုတ် သင်မလိုချင်မည့် စောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားများကို ပြောရန် ခွင့်ပြုသည်။ ဤအစီအစဉ်ကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ညွှန်ကြားချက် သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု တရားဝင်ကြေငြာချက်ဟုလည်းခေါ်နိင်ပါသည်။
တည်ရှိဆဲဖြစ်သော သေတမ်းစာတစ်ခု သည် ဘဝအတွက် အကျိုးပြုနေသော တိုင်းတာချက်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရည်ညွှန်းသည်။ ဤသည်မှာ သင့်ကို ပုံမှန်အားဖြင့် သင်သေနိုင်သောအခါတွင် သင့်ကိုအချိန်ကျော်လွန်ပြီးအသက်ရှင်နိုင်စေရန် ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သော အဆင့်မြင့် နည်းပညာအသုံးပြုစောင့်ရှောက်မှုကို ဆိုလိုပါသည်။
ဤလုပ်ဆောင်မှုများတွင် ပါဝင်သည်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်-
CPR (နှလုံးအဆုတ်ပြန်လည်အလုပ်လုပ်စေရန် ရှေးဦးသူနာပြုနည်း) – သင်ရပ်တန့်ပြီးနောက် အသက်ရှူခြင်းနှင့် သင်၏ နှလုံးကို ပြန်၍ အလုပ်လုပ်စေရန် အရေးပေါ်ကုသမှု
အသက်ရှူစက် – သင့်ကို အသက်ရှူနိုင်စေသည့်စက်
ကျောက်ကပ်အတွင်းမှ ရေပိုနှင့် အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားသန့်စင်သော လုပ်ငန်းစဉ်– သင်၏ကျောက်ကပ်များ၏အလုပ်ကို လုပ်ဆောင်ပေးသောစက်
ပြွန် သို့မဟုတ် သွေးပြန်ကြောလမ်းကြောင်းထဲအစာသွင်းခြင်း– အကယ်၍ သင်မမျိုချနိုင်တော့သည့်အခြေအနေတွင်
ပိုးသတ်ဆေးများ – ရောဂါပိုးများ ကူးစက်ဝင်ရောက်ခြင်းကို တိုက်ထုတ်ရန် ဆေးများ
ရှေ့နေ၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အာဏာ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ်
ရှေ့နေ၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အာဏာ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ် ခန့်အပ်ခြင်းသည် သင့်ကိုယ်စား ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သင်ပြုလုပ်စေချင်သော လူကို ပြဆိုရန် ခွင့်ပြုသည်။ ဤလူကို သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ်၊ ကိုယ်စားလှယ်၊ သို့မဟုတ် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရ ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ် အဖြစ်ခေါ်နိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤနာမည်များမှာ တူညီသော်လည်း တစ်ခုချင်းစီတွင် ကွဲပြားခြားနားသော စည်းကမ်းများ သို့မဟုတ် လိုအပ်ချက်များ ရှိနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် သင်၏ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များကို သင်ကိုယ်တိုင်မချနိုင်ပါက ဤလူသည် သင့်အတွက် ထိုရွေးချယ်မှုများကို ဆုံးဖြတ်ချက်ချပေးနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ်သည် ပုံမှန်အားဖြင့် ဆွေမျိုးတစ်ဦး သို့မဟုတ် ရင်းနှီးသော သူငယ်ချင်းတစ်ဦး ဖြစ်သည်။
ဤကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာအမျိုးအစားကို ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ် ချိန်းချက်မှုတစ်ခုဟုလည်း ခေါ်ပြီး ၎င်းသည် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက် ရှေ့နေ၏ ခိုင်မာသော အာဏာ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သည်။
အချို့သော ပြည်နယ်များတွင် စာရွက်စာတမ်းသည် သင့်ကိုယ်တိုင်အတွက် သင်စကားပြောနိုင်သောအခါတွင် ချက်ချင်း အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ သင်သည် ဤဆန္ဒကို သိစေရန် ပုံစံလျှောက်လွာပေါ်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။
ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာများကို မည်သည်အချိန်တွင် ဖြည့်စွက်ရမည်နည်း
အကောင်းဆုံးအနေဖြင့် ဤစာရွက်စာတမ်းများကို သင်ကျန်းမာသောအခါတွင် ဖြည့်စွက်သင့်ပါသည်။ သင်ကျန်းမာသောအခါတွင် ဤရွေးချယ်မှုများကို ပြုလုပ်ခြင်းသည် သင်နှင့် သင်ချစ်သော သူများပေါ်တွင် နောက်ပိုင်းတွင် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကို လျော့နည်းစေနိုင်သည်။
ထို့ပြင် လူများစွာသည် သေဆုံးခါနီးအချိန်တွင် လူအများစုက ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာများအား ဖြည့်သွင်းမှုကို ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်လုပ်ဆောင်သည်။ သို့သော်လည်း စောင့်ရှောက်မှုအတွက် သင်သည် သင်၏ဆန္ဒများနှင့် ပက်သက်၍ စဉ်းစားရန် ပြင်းထန်သော ဖျားနာမှုတစ်ခုနှင့်အတူ ရောဂါရှာဖွေခံရသည့်အချိန်အထိ စောင့်ဆိုင်းရန်မလိုပါ။
ဤကိစ္စရပ်များကို ပြောဆိုဆွေးနွေးရန် ခက်ခဲပါသည်။ သို့သော်လည်း သင်လိုချင်သော စောင့်ရှောက်မှုအမျိုးအစားနှင့်ပက်သက်၍ သင်နှင့် နီးစပ်သော လူများကို ပြောခြင်းသည် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရှိပါသည်-
၎င်းသည် မိသားစုဝင်များအား သင်လိုချင်သောအရာသိရန် ရံဖန်ရံခါ နှစ်သိမ့်ပေးသည်။
၎င်းသည် မိသားစုဝင်များအား ဆွေးနွေးမည့်အကြောင်းအရာကို စတင်မိတ်ဆက်ရခြင်းအခြေအနေကို ရှောင်ရှားနိုင်စေသည်။
သင်သည် စိတ်ငြိမ်းချမ်းခြင်းကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။ သင်သည် သင်ချစ်သောသူများအား ချန်ထားရစ်မည့်အစား သင့်ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်မှုများ ပြုလုပ်နေပါသည်။
၎င်းသည် သင်နှင့် သင်ချစ်သောသူများအား နေ့တစ်နေ့ကို ပြီးပြည့်စုံစွာ ဖြတ်သန်းရန်နှင့် အနာဂတ်အကြောင်းစိုးရိမ်ပူပန်ရမှုကို လျော့နည်းစေရန် ကူညီပေးနိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်၏မိသားစုနှင့် အခြားချစ်သောသူများနှင့် စကားပြောရန် ခက်ခဲပါက မိသားစုတွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်ပြီး လူမှုရေးလုပ်သား သို့မဟုတ် ခရစ်ယာန်ဘုန်းကြီး တစ်ဦးကို ဆွေးနွေးရာတွင် ဦးဆောင်စေရန်အတွက် ဖိတ်ခေါ်ရန် စဉ်းစားပါ။
ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာများကို လက်မှတ်ထိုးခြင်းနှင့် ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
သင်၏စောင့်ရှောက်မှုစင်တာ၌ သင်၏ရှေ့နေ သို့မဟုတ် လူမှုရေးလုပ်သားတစ်ဦးဦးသည် သင့်လျော်သော ပုံစံများကို ဖြည့်ရန်အတွက် လမ်းညွှန်ရာတွင် ကူညီနိုင်သည်။ ပြည်နယ်တစ်ခုချင်းအလိုက် သီးခြားပြဌာန်းထားသော ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာများကို အမျိုးသား နာတာရှည်နှင့် ဝေဒနာသက်သာပျောက်ကင်းစေသော ပြုစုစောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့အစည်းမှ ဒေါင်းလုဒ်ရယူနိုင်သည်။
သင်သည် ၎င်းတို့ကို ဖောင်ဖြည့်ပြီးသည်နှင့်-
၎င်းတို့ကို လက်မှတ်မထိုးမီ တိကျမှုရှိစေရန်အတွက် သင်၏ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အဖွဲ့ဝင် သို့မဟုတ် အခြားသော ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ပညာရှင်တစ်ဦးဦးနှင့် အတူ ၎င်းတို့ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။ ပြည်နယ်အများစုတွင် သက်သေတစ်ဦး သို့မဟုတ် စာရွက်စာတမ်းများကို လက်မှတ်ထိုးနေချိန်တွင် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေပြခွင့်ရှိသူ တစ်ဦးလိုအပ်ကြောင်း ညွှန်ကြားထားသည်။
၎င်းတို့ကို သင်လက်မှတ်ထိုးပြီးချိန်တွင် မိတ္တူများကို သင်၏ ဆရာဝန်၊ ဆေးရုံ နှင့် မိသားစုဝင်များထံသို့ ပေးပါ။
မိတ္တူများကို လုံခြုံပြီး အလွယ်တကူ ရယူနိုင်သောနေရာတွင် သိမ်းထားပါ။
စာရွက်စာတမ်းများတွေ့နိုင်သော နေရာကို ဖော်ပြခြင်းနှင့် ရှေ့နေ၏ ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာ အာဏာနှင့် သင့်တွင် တည်ရှိဆဲဖြစ်သော သေတမ်းစာရှိကြောင်း ကြေငြာထားသော ရေးသားထားသည့် ဖော်ပြချက်တစ်ခုနှင့်အတူ ကဒ်တစ်ခုကို သင်၏ပိုက်ဆံအိတ်ထဲတွင် သိမ်းထားရန် စဉ်းစားပါ။
ပြည်နယ်တစ်ခုစီတွင် ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာများနှင့် ပက်သက်၍ ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေများရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် အထူးစောင့်ရှောက်မှုကို သင့်အား ကုသမှုပေးနေသော သို့မဟုတ် သင်နေထိုင်သောနေရာရှိ ပြည်နယ်ဥပဒေများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။ ပြည်နယ်အများစုတွင် အခြားပြည်နယ်တစ်ခုမှ သင့်လျော်သော ပုံစံ (ဖောင်)တစ်ခုကို လက်ခံမည်ဖြစ်သော်လည်း ပြည်နယ်တစ်ခုတွင် လက်ခံနိုင်သော သက်ရှိထင်ရှားရှိသူ၏ သေတမ်းစာ သို့မဟုတ် ရှေ့နေ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပါဝါသည် အခြားပြည်နယ်တွင် လက်မခံခြင်းမျိုး ရှိနိုင်သည်။
ရေးသားထားခြင်း မဟုတ်သော ရွေးချယ်ခွင့်
လက်မှတ်ထိုးထားသော ဥပဒေဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုတွင် ဖော်ပြထားသော သင်၏ ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာဆိုင်ရာ ဆန္ဒများကို ရရှိထားခြင်းမှာ အမြဲတစေ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍ ရေးသားမှုတွင် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု ကိုယ်စားလှယ်ကို ချိန်းချက်ရန် သင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါက သင့်အတွက် လိုအပ်ချက် ပေါ်ထွက်လာသင့်သော သင်ပြောချင်သည့် ဆရာဝန်တစ်ဦးကို သင်ပြောပြနိုင်သည်။ ပြည်နယ်အများစုတွင် သင်ရွေးချယ်သောလူကို သင်၏ကိုယ်စားလှယ်ဟုခေါ်သည်။ သင်၏ဆရာဝန် သည် သင်၏ဆေးကုသမှုမှတ်တမ်းတွင် ကိုယ်စားလှယ်၏နာမည်ကို ရေးသားပါမည်။ အနာဂတ်တွင် သင်ကိုယ်တိုင်အတွက် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ရွေးချယ်စရာများကို သင် မရွေးနိုင်လျှင် ထိုသူက အားလည်း အားမည်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များလည်း ချပေးရန် ဆန္ဒရှိမည် ဆိုလျှင် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းက ထိုသူကို ဆင့်ခေါ်မည်ဖြစ်သည်။
သင်၏ဆန္ဒများကို အခြားသောလူများနှင့်အတူ မျှဝေပါ။
ကြိုတင်ညွှန်ကြားလွှာတစ်ခုသည် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ရင်ဆိုင်ရမည့်အခြေအနေများအားလုံးကို ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိကြောင်း လေ့လာမှုများက ဖော်ပြထားသည်။ သင့်ထံတွင် တစ်စုံတစ်ခုသော အကြောင်းအရာတစ်ခု ဖြစ်လာလျှင် သင်၏စောင့်ရှောက်မှုသည် သင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကိုယ်စားလှယ်၊ သင့်ဆရာဝန်နှင့် သင့်မိသားစုပေါ်တွင်မူတည်မည်ဖြစ်သည်။ သင့်ဆန္ဒများကို ၎င်းတို့က ပိုသိလေလေ၊ လိုအပ်လာသောအခါ ၎င်းတို့အား ပိုကောင်းစွာ လုပ်ပေးနိုင်လေ ဖြစ်သည်။
ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး- ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ
Because childhood cancer is so rare, health care providers may never care forachildhood cancer survivor. Those that do may not be aware of the possible late effects of childhood cancer treatment.
ကင်ဆာရောဂါဖြစ်လွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အချို့လူများတွင် မျိုးရိုးဗီဇဆိုင်ရာအခြေအနေတစ်ခုကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်တည်ရန် အခွင့်အရေး ပိုများသည်ကို ဆိုလိုသည်။
ကင်ဆာရောဂါ ဖြစ်လွယ်ခြင်းအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာရန်
ချို့ယွင်းချက် - အမည်လိုအပ်သည်။
ချို့ယွင်းချက် - အီးမေးလ်လိပ်စာလိုအပ်သည်။ ကျေးဇူးပြု၍ မှန်ကန်သောအီးမေးလ်ထည့်ပါ
ငါဆက်သွယ်ရေးလက်ခံရရှိရန်သဘောတူသည်။ * ချို့ယွင်းချက် - ဆက်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်လိုအပ်သည်။
ကို ကျွန်ုပ် သဘောတူပါသည်။ အသုံးပြုမှု စည်းမျဉ်းများ * ချို့ယွင်းချက် - အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်များကိုအသိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်သည်။
© 2022 St. Jude ကလေးများဆိုင်ရာ သုတေသန ဆေးရုံ။ မူပိုင်ခွင့်အားလုံး ရရှိပြီး။